नारीको अपमान !
शान्ताः हामी महिलालाई अधिकारै पुगेन । धेरै अधिकार भए पो अगाडि बढ्न सकिन्छ्र, आफ्नो प्रगति हुन्छ, परिवारलाई सहयोग पुग्छ, देशलाई पनि मद्दत गर्न सकिन्छ्र । अधिकार जति जम्मै पुरुषले हातमा लिएका छन्, अनि महिलाले के गर्ने ?
अखण्ड, खण्ड–खण्ड र पाखण्ड
एउटा खट्कीरहने कुरोः हामीलाई के कुरा प्यारो लाग्छ होला ? धेरै जवाफहरु तछाँडमछाँड गर्दै आए । एउटा आडम्बर अनि त्यसभित्र लुकेर बसेका परजीवी आडम्बरहरु । एउटा बोझिलो टाउको अनि त्यो टाउकोको अड्कल ।
हेटौँडा । मकवानपुरकी लोकप्रिय साहित्यकार अप्सरा तिम्सिनाको आइतबार राती निधन भएको छ । स्नानकक्षमा लडेर सामान्य घाइते भएकी ४५ वर्षीया तिम्सिनाको ज्वरो आउने, पेट दुख्ने तथा जिउ गल्ने समस्याका कारण हेटौँडाको चुरेहिल अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । थप उपचारका लागि आइतबार नै भरतपुर लगिएकोमा राति उनको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ ।
युवती– मलाई किन जिस्क्याएको ?
वरिष्ठ साहित्यकार शाह पुरस्कृत
राँझा । भेरी साहित्य समाज बाँकेले यस वर्षको प्रेमप्रकाश मल्ल मधुकर स्मृति पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार महेशविक्रम शाहलाई प्रदान गरेको छ । प्रेमप्रकाश मल्ल मधुकरको ८४औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा शनिबार नेपालगञ्जमा आयोजित समारोहमा रु २५ हजार १११ राशिको सो पुरस्कार वरिष्ठ साहित्यकार शाहलाई प्रदान गरिएको हो ।
आज पनि ऊ सुतिन ।
नानीका जुँगा !
कुनै समयमा फ्रान्समा लामा दाह्री–जुँगा पाल्नलाई ‘कर’ तिर्नु पथ्र्यो रे ! आजकाल मान्छेहरुका ओठ माथि जुँगा त्यतिसाह्रो देख्न पाइँदैन ! जुँगा सम्बन्धी एउटा धेरै
५० प्रश्नहरु !
हाम्रो वरिपरी यति धेरै कुराहरु भइरहेका हुन्छन् । समाचार बन्छ, सुन्छौँ । आज भने केही प्रश्नहरु पो गर्न मन लागेर आयो ।
‘नेपालका गिद्धहरू’ नामक सचित्र पुस्तक बजारमा
पोखरा । प्रकृतिको कुचिकार मानिने गिद्धलाई समेटिँदै ‘नेपालका गिद्धहरू’ नाम सचित्र पुस्तक बजारमा आएको छ । चरा संरक्षणका साथै यसको अध्ययन अनुसन्धानमा लागेका तीन जना व्यक्तिको संयुक्त लेखनका पुस्तक बजारमा आएको हो । पोखरा पन्छी समाजका अध्यक्ष मनशान्त घिमिरे, सचिव हेमन्त ढकाल र सदस्य कृष्णप्रसाद भुसालको संयुक्त प्रयासमा ६८ पृष्ठको पुस्तक प्रकाशन गरिएको हो ।
हेल्लो गाईज एण्ड गोरूज !
आठ ‘किलास’(क्लास) पढेर मधेस बसाईं हाकिईयो । चुचुरो परेको टोपी, दौरा–सुराल, जाली वाला चप्पल ! कपाल पछाडी फर्काउने नियतले ‘टाईट’ टोपी ! मधेस सोचे जस्तो रमाईलो भएन । ‘ईस्कूल’मा साथीहरुले गर्नुसम्म हैरान गराउँथे । टोपी खोसिदिने, ठाडो परेको लामो टुप्पी तानेर ‘घिऊ चोर...टुप्पी ठाडो’ भनेर लखेट्ने !